Taratasinà Vehivavy Kiobàna Iray Ho An’i Donald Trump · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jolay 2017 16:11 GMT
« La Havana ». Sary an'ny mpampiasa Flickr Pedro Szekely, navoaka nahazoana alalàna CC 2.0.
Efa mba fantatrao ve ny dikan'ny teny hoe fahamendrehana?
Mampalahelo avokoa Andriamatoa Filoha Trump, ireo fepetra voalazanao tamin'ny zoma 16 jona 2017 teo. Mampalahelo tahaka ity vondron'olona iray izay mihevitra ny tenany ho Kiobàna ka mitangorona manodidina filohanà firenena hafa iray, miangavy azy mba hanempotra ara-toekarena ny mpiray tanindrazana amin'izy ireo, toy ireo izay mihiaka Viva Cuba libre (Ho ela velona anie Kiobà Afaka) ery ampitan'ny vavaranomasin'i Floride, na ilay mpikambana amin'ny Kaongresy izay tahaka ny mahafantatra ery ny firenena misy ny fiavian'ireo ray amandreniny, fa tsy mbola tany akory na indray mandeha aza, na io iray hafa io izay zara raha mahay manonona ny teny hoe “fahafahana” miaraka amin'ny hatsaràna sy ny fahatsoran'ny teny espaniola. Amiko, midika tsy fanajàna ny governemanta kiobàna sy ny vahoaka kiobàna, ireo fepetra ireo.
Avonavonana tanteraka – teny iray mirindra miaraka amin'ny “tsy fahalalana” ary tsy fifanojoan-javatra io – mamaritra ny fitondrànao, nàka habe vaovao tamin'ny 16 jona 2017. Tsy misy antony hanontaniana filoham-pirenena iray izay tsy mahafantatra akory ireo tena antony mahatonga ny fitomboan'ny hafanana (hita manokana ao anaty fanjakana izay misy ny harena lalainy) ny handray an-tanana ny fahasarotan'ny firenena iray toa an'i Kioba. Ny Filoham-pirenena iray izay hita ho tsy afaka hifofotra amin'ny hoavin'ny maha-olombelona akory dia tsy ho afaka hanolo-tena mikasika izay hoavin'ny nosy kely iray ao Karaiba sy ireo mponina ao aminy akory. Kanefa, tena faran'izay tsotra io. Izay angatahin'ireo teratany kiobàna amin'i Etazonia, ary izay foana, dia ny fanajàna. Io indrindra no tsy ampy tamin'ny 16 jona lasa teo.
Teny ampiandohan'ny taratasiko, Andriamatoa Filoha, nanontany anao aho raha toa fantatrao ny dikan'ny teny hoe “fahamendrehana”. Ho an'ny mpitondra iray, zavatra mora tanterahina ny fanehoana fahamendrehana. Tsy mila manontany tena ny amin'izay hohanina, izay hatoriana na izay hatafy ny ankizy. Ireo olona tsirairay no afaka mirehareha ho mendrika, fa tsy ireo governemanta, satria izy ireo no tsy maintsy handray ireo fanapahan-kevitra sarotra. Avy amina fianakaviana mahantra aho ary mendrika. Teraka tao anaty fahantrana ireo fianakaviako ary mendrika, ary nijanona toy izany foana hatramin'ny andian-taranaka efa ho fahatelo. Niasa ho toy ny mpanabe amina ambaratonga voalohany izy ireo, mpitana tranomboky, mpanampy amin'ny fanabeazana, teknisianina, mpiandry biby fiompy na tambanivohitra. Fony mbola 9 taona aho, nanontany ahy ny reniko ny amin'izay tiako hianarana rahatrizay tonga eny amin'ny anjerimanontolo aho, namaly aho hoe: “Tiako daholo afatsy ny ho mpampianatra ihany, satria tsy tiako intsony mbola hahantra isika.”.
Vola azo noho ny famarotana ireo zanak'ondry kely roa kamboty, nofahanana tamina tavoahangy nandritra ny volana maro, no nahafahana nanamboatra ireo varavarankely tao an'efitranon'ny reniko. Efa ho 25 taona ny fandriako. Tadidiko avokoa ireo kiraroko hatramin'ny kilasy voalohany ka hatramin'ny kilasy faha-enina, tsy manahirana rehefa manana hatramin'ny telo. Azoko resahina anao ny nahitako voalohany ireo vatomamy natsipinà vahiny iray avy tany anaty fiara nofainy, teo amin'ny morontsirak'i Guanabo, satria mbola tsy nahita vatomamy miloko marobe toy ireny mihintsy aho. Tadidiko ireo boky tsirairay novakiana nanomboka ny kilasy faha-fito hatramin'ny kilasy faha-sivy, satria nanavotra ahy tamin'ilay Vanimpotoana manokana izy ireny [Fanamarihan'ny mpandika: anarana nomena ny krizy ara-toekarena taorian'ny firodanan'i URSS].
Na dia teo aza ireo fahasahiranana ara-toekarena, vitako ny nanao izay hahasambatra ahy, tamin'ny fomba samihafa. Ireo manga, ny fotoanan'ny voatabia ary ireo tendrombohitra izay manodidina ny tranoko no nahasambatra ahy. Namorona tantara an'arivony aho mba hanandramana hanomezana dikany an'io fahantrana io sy hamadihana azy ho lasa harena ara-panahy. Indray andro, notantaraiko tamin'ireo namako tao an-tsekoly fa ny fanipihana mahitsy avy ao ambadiky ny tranoko miampita mankeny antendrombohitra, dia azo hanatràrana ny tobim-pamaharan'ny tafika an-dranomasina ao Guantanamo. Toy ny akaiky taiko io toerana io, ankafizin'ireo kiobàna mpanjono talohan'ny nakàna azy ho toby famonjàna, noho ireo vaovao maro heno mikasika azy io sy ny zava-miafina manodidina azy. Ho anareo namako, noresahiko azy ireo ny amin'ireo saham-banja milevina, ny ranomasina, ny endrik'ireo miaramila kiobàna, ireo endrika amerikana, ireo trano eny ambanivohitra. Nampianarin'ny fahantràna aho mba haka sary an-tsaina. everiko fa tsy ny zaza rehetra no tokony hahalala fahantrana mba hampivoarany ny fahaizany maka sary an-tsaina. Izay tiako ambara, angamba miaraka amin'ny fanahy somary kidaladala kely, dia hoe nbianaranay ny nilata tamin'ireo sakana izay napetraky ny zava-misy ho eo anoloanay.
Rakotra tantara toy izany avokoa ireo lalambe rehetra ao amin'ny firenena. Tamin'ny 17 desambra 2014, nasehon'i Barack Obama [EN] fa azo noeritreretina ihany koa ny zavamisy iray hafa. Saingy, mba hanaovana resaka mivantana, nampianarina hitandrina izahay ary resy lahatra aho fa vitsy ihany tamin'ireo Kiobàna no gaga tamin'ireo fepetra nambara tamin'ny herinandro lasa. Nampianarina hiandry ny ratsy indrindra izahay ary hankalaza ny tsara indrindra, rehefa mitranga izany. Nefa, tena tsy izay velively no mitranga. Tsy mba nahazo tombony t amin'ny fisondrontan-karama izahay, tsy nahazo fidirana amin'ny aterineto araka izay tokony ho izy ; tsy nampiharina ireo fanavaozana lalàm-panorenana nangatahina ; samy tsy niainanay na ny toekarena matanjaka na ny sosialisma maharitra, tsy nisy. Niainanay ny fanavaozana fifindràmonina, ny faran'ny karatra fotsy, ny fisokafan'ny sehatra tsy miankina, ny fahafahana mividy sy mivarotra fiara sy trano, ary koa ireo sitraka hafa sasany antsoina malefadefaka hoe fanavaozana. Ao anatin'ireo fihenjanan'ny tady misy amin'ny samy olom-pirenena sy ny governemanta ireo, nandresy an'ady izahay, saingy manomboka midaraboka ireo fandresena hafa, trosa anjato taonany an'ny firenena iray manoloana ireo mpoinina ao aminy.
Avereno rehefa vita ny ahy, Andriamatoa Filoha: «Tokony ho maimaimpoana sy ho an'ny rehetra ny fidirana mianatra.» Tsy fanambaràna toy ny an'i Bernie Sanders akory izany, fa tanjona iray vitan'ireo firenena marobe mahantra farahidiny kokoa noho ny anao ny nanatratra azy. Avereno rehefa vitany ny ahy, Andriamatoa Filoha: «Tokony ho maimaimpoana sy ho an'ny rehetra ny fahazoana fitsaboana.» Fomba iray hafa koa, tsy ho an'i Kiobà irery ihany, fa koa ho an'i Singapaoro, Irlandy na Kanadà mba hanesoana ny firenenao. Firaisana tsikombakomba iraisam-pirenena mahatsiravina mitetika ny hametraka an'i Etazonia eo amin'ny toerana tsy ahazoana aina.
Tapitra hatreo ireo fitsangatsanganana manokan'ny teratany amerikana. Fantatrao ve hoe any amin'iza no miantraika izany fanapahankevitra izany? Voalohany indrindra, any amin'ireo olom-pirenenao, firenena iray izay mirehareha amin'ny fahalalahany sady manome alalana ny governemantany hametra ny fahalalahany mivezivezy (voasoratra ao anatin'ny Fanambaràna manerantany ireo Zon'olombelona) ary, faharoa manaraka izany, any amin'ny governemantan'i Etazonia. Firenena matanjaka toy inona no mino fa ny famelàna ireo olom-pireneny ho any amin'ny nosy iray izay misy mponina 11 tapitrisa sy filoha antsoina hoe Castro dia tsy manao afa-tsy izay hampanan-karena io fitondram-panjakana io? Efa nahita mpikambana iray tao amin'ny governemanta kiobàna nanadio ireo efitranon'ny Hotely Saratoga ve ianao, na niasa tany amin'ireo trano fisakafoanana marobe na ireo tranom-bahiny tao La Havane, na namboly ireo sakafo organika izay ankafizin'ireo Amerikana fatratra? Efa nahita an'i Raúl Castro nivarotra fahatsiarovana teo amin'ny Place de la Cathédrale ve ianao, José Ramón Machado Ventura nandray fiarabe fitaterana mba ho tonga aloha any ampiasana ny maraina, ny tranon'i Ramiro Valdés ampanofaina ao amin'ny AirBnb, i Miguel Díaz Canel manome sosokevitra mponina iray ao Kentucky mba handeha mandroso sy miverina miala ao an-tanàndehibe mankany amin'ny seranam-piaramanidina na i Lázara Mercedes López Acea manadio ireo toerana fidiovana ao amin'ny Terminal 3? Etsy ampiako ianao amin'ny valinteny: tsia. Tsy ireo olona voatanisa teo aloha ireo fotsiny akory no mahazo tombony amin'ny fitomboan'ny fizahantany amerikana eo amin'ny nosinay. Mahazo ampahany ny governemanta, mazava ho azy, tokony ho fantatrao izany amin'ny maha-mpitondra anao, nefa manome tombony ho an'ireo olom-pirenena lambda ihany koa: ny mpandroso sakafo, ny tambanivohitra, ny mpamily fiarakaretsaka, ny mpiasa an-trano.
Tsy nanana akory ny herimpon'i George W. Bush ianao hanapaka ireo famindràna vola, ireo fitsangantsanganana ary ireo fahazoandàlana (visa). Tsy misy afa-tsy fampisehoana fepetra fanibohana ireo fepetranao, izay mikendry ny hampanginana an'i Marco Rubio, ilay mpifanandrina taminao nandritra ny fampielezankevitra ho filoham-pirenena, ka imbetsaka nanala baraka anao. Tsy hoe mba mahira-tsaina manokana izy, fa satria mora loatra ny manesoeso anao. Mamofona hakanosana ireo fepetranao. Fanafenana mandalo fotsiny ihany, fanalàna andro iray hisarihana ireo olom-pirenenao hanalavitra tanteraka ireo tena olana ao amin'ny firenenao. Ary tsy hanaovako sarinteny akory raha ny amin'ny hoavin'ny firenenao, fa ny toerana misy azy ankehitriny. Ireo fepetranao, Andriamatoa Filoha, dia vokatry ny eboebo sy tsy fisiana fanajàna ara-politika. Raha toa ireo firenena hafa milefitra eo anoloan'ny anao, Kiobà kosa tsy naka velively io toerana io ary tsy ho androany no hanomboka izany. Angamba efa lasa rano ny fifanarahana taloha niaraka tamin'i Obama, fa ny fahamendrehanay kosa mitoetra tsy simba.